के गुगल कूकी क्रम्बलिंग हो? | Martech Zone
बिहीबार, डिसेम्बर 18, 2008 सोमबार, डिसेम्बर 22, 2008 Douglas Karr
मसँग यो सिद्धान्त छ कि कुनै पनि चीज असीमित रूपमा स्केलेबल छैन। सफल व्यवसायहरू प्राय: तिनीहरूको बृद्धिलाई व्यवस्थित गर्नको क्षमताभन्दा बाहिर हुन्छन्, थोरै मा सानो काम गर्ने टेक्नोलोजीहरू विरलै ठूलो काम गर्दछन्… कर्मचारीहरू पनि प्रायः उनीहरूको क्षमता भन्दा बाहिर बढुवा हुन्छन्।
गुगल गत दशकमा अभूतपूर्व वृद्धि भएको छ। केही समयको लागि हामीले तिनीहरूलाई रोशनीमा राख्यौं र तिनीहरूलाई हाम्रो सफलताको नापका रूपमा प्रयोग गर्‍यौं। हिजो, हामीले बारलाई कम गर्‍यौं, हाम्रो भित्ताको बाहिर अनुसन्धान गर्न सुरु भयो र गुगलमा कडा हेरे जब सामान्य केहि हुन्छ भने।
भर्खरका गुगल असफलता:
आज म मेरो साथी एरिकको ब्लगमा टिप्पणी गर्न गइरहेको थिएँ ब्लगर (मानिसले चीजबर्गरको साथ प्रेमिकालाई हमला गर्दछ), तर म टिप्पणी पृष्ठ पनि लोड गर्न सकेन।
केही दिनको लागि, हामीसँग कुनै साइटहरू दर्ता गर्न सकेनौं गुगल खोज कन्सोल। साइटले हामीलाई प्रमाणिकरण त्रुटि दिन जारी राख्यो कि हामी हाम्रो 404०XNUMX मा गलत स्थिति कोडहरू फर्काइरहेका छौं (पृष्ठहरू फेला परेन)। वास्तवमा, हाम्रो कर्पोरेट ब्लगिंग प्लेटफर्म उपयुक्त कोडहरू फिर्ता गर्दै थियो। एक दिन वा पछि, सबै ठीक थियो!
Google Reader सधैं जस्तो देखिन्छ लुपिंग ममा, मलाई फिडहरू देखाउँदै जुन मैले पहिले नै पढेको छु… बारम्बार र फेरि।
हामीले लागू गरेका छौंaGoogle विश्लेषण यस हप्ता ग्राहकको खातामा जुन साइट एक पृष्ठमा प्रमाणित भएको थियो, अर्को पृष्ठमा प्रमाणित गरिएको थिएन र कुनै तथ्या .्क लिइरहेको छैन। हामीले खाता मेटाउनुपर्‍यो र फेरि सुरु गर्नुपर्‍यो।
अद्यावधिक: १२/२१ - मेरो फिडलाई गुगलमा रूपान्तरण गरेदेखि, म लगइन गर्न सक्दिन र मेरो तथ्या .्क र मेरो पुरानो फिड ठेगाना कहिले पनि अपडेट हुँदैन।
गुगलले असफल भएको जस्तो लाग्ने एक मात्र कुरा सान्दर्भिक विज्ञापन प्रदर्शन गर्दछ। हम्म।
टैग: मोबाइल एड-टु-कार्ट दरहरूमोबाइल एसडीकेschmapस्लाइडरस्टारबक्सस्टारबक्स मोबाइल अनुप्रयोगयो अब मनोरंजन हेर्नुहोस्
आश्चर्यजनक ठूलो ढाँचा प्रक्षेपण टेक्नोलोजी
डिसेम्बर १, २०१ 19 2008:२:6 अपराह्न
राम्रोसँग थाहा पाउनु भयो कि गुगलले हामीलाई अझै विज्ञापनहरू प्रदान गर्न सकेका छैनन्। मैले कहिले काहिँ नि: शुल्क सेवाहरू कहिले काँही तल झरेको बुझ्न सक्छु, तर मलाई के चिन्ता लाग्छ जब उनीहरूको "व्यवसायिक वर्ग" अनुप्रयोगहरू (होस्ट गरिएको मेल, अनुप्रयोगहरू, इत्यादि) एक पटकमा घण्टा वा दिन तल डाउन हुन थाल्छन्। किन वा कहिले तिनीहरू फिर्ता हुनेछ भनेर कुनै उल्लेख संग। त्यो हराएको समय हो जुन मेरो व्यवसायको अर्थ पैसा गुमाउनु हो। मेरो आफ्नै सामानहरू नचढाईकन म ज्यादै बचत गर्दै छु।
डिसे 22, 2008 मा 11: 56 AM
मैले मेरो ब्लगरको साथमा केहि मुद्दाहरूको अनुभव गरिरहेको छु। उल्लेख गर्नु पर्दैन, मेरो गुगल अलर्टहरू बोनकरहरू हुन्। मलाई थाहा छ कि म यस मात्रै एक मात्र होईन!